Ukhenketho lwaseJamaica luthumela amazwi ovelwano kusapho lukaSue McManus
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Ukhenketho lwaseJamaica luthumela amazwi ovelwano kusapho lukaSue McManus
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Emva kwexesha uSue McManus, igorha lezokhenketho eJamaica
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, udlulise amazwi ovelwano olunyanisekileyo kwizizalwane kunye nabahlobo benkokheli yezokhenketho, uSue McManus, osweleke kutshanje eMelika.
U-Sue uhambe ngaphaya komnxeba womsebenzi wokunyusa indawo ekuyiwa kuyo eJamaica kwaye wadlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni iiholide kunye nomtsalane kwesi siqithi.
UMcManus wakha igama elomeleleyo njengengcali yobudlelwane noluntu kwishishini lokhenketho.
Usebenze kunye neefemu ezininzi zobudlelwane boluntu ezihamba phambili ezisebenza ngokusondeleyo neBhodi yezoKhenketho yaseJamaica ekukhuthazeni indawo ekuyiwa kuyo eJamaica.
“Ndibuhlungu kakhulu kukusweleka kukaSue McManus. Ngokwenene wayeligorha kwicandelo lezokhenketho elagqitha kumnxeba womsebenzi wokukhuthaza indawo ekuyiwa kuyo eJamaica. Udlale indima ebalulekileyo ekukhuthazeni iindawo ezininzi ekuchithelwa kuzo iiholide kunye nezinto ezinomtsalane kubude besi siqithi, nto leyo ibinokuba negalelo ekuhambeleni kweendwendwe kule ndawo yethu kule minyaka ingamashumi, ”utshilo uBartlett.
“Egameni likaRhulumente nabantu Jameyikha, kubandakanywa sonke kumbutho wabakhenkethi, ndithanda ukudlulisa amazwi ovelwano kwizalamane nezihlobo zikaNks. McManus. Sinethemba lokuba iNkosi iya kuninika nonke intuthuzelo eniya kuyidinga ukuze ninyamezele elixesha lentlungu kwaye umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo, ”wongeze watsho uMphathiswa.
UMcManus, owafudukela eJamaica esuka e-United Kingdom kumashumi eminyaka eyadlulayo, wazenzela igama njengengcali yobudlelwane noluntu kwishishini lezokhenketho. Usebenze kunye neefemu ezininzi zobudlelwane boluntu ezihamba phambili ezisebenza ngokusondeleyo neBhodi yezoKhenketho yaseJamaica ekukhuthazeni indawo ekuyiwa kuyo eJamaica ngeminyaka yoo-1980 nango-1990.
Eyaziwa ngamandla akhe kunye nentshiseko, UNks McManus naye wanceda ukuthengisa iipropathi ezahlukeneyo kubandakanya iiholide zeSuperClubs.
“Akazange enze iJamaica nje kuphela ukuba ibe likhaya lakhe, kodwa wanikezela nobomi bakhe bonke ekuncedeni ukukhuthaza imveliso yethu yezokhenketho kwaye Ukwakha iBrand Jamaica. Ngokwenene wayengumntu oqeqeshiweyo kwaye uyakhunjulwa kakhulu lusapho lonke lwezokhenketho, ”utshilo uBartlett.
Oktobha 21, 2021 kwi-01: 37
umfanekiso weskrini صوتي شات عراقيات شات بغداديات umfanekiso weskrini